mm3 လက်ကွက် — MYSTERY ZILLION
October 2011 edited October 2011 in Daily Life
ကျနော် mm3 လက်ကွက်တွေသိပ်မပိုင်ဘူး အထူးသဖြ့င် ပတ်ဆင့်တွေပါ .. ဉပမာ 'တ' အောက်မှာ 'တ' ဘယ်လိုဆင့်ရမယ်ဆိုတာ ေပြာပါ.. keyboard map အပြည့်အစုံရှိရင် ပေးပါ
try "w" and then "shift +f" and then "w" again. look like this " တ္တ "
ကျေးဇူး .. day
မြန်မာသရီး လက်ကွက်ကို ကျွမ်းဝင်ဖို့ကို မခက်ခဲလှပါဘူး.. အများအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေက ဝင်းလက်ကွက်ကနေ လာတဲ့သူတွေ များကြပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဝင်းကနေ ဇော်ဂျီ၊ ဇော်ဂျီကနေ မှ မြန်မာ ၂၊၃ စသည်ဖြင့် ပြောင်းလာရတာပါ။
ဝင်းသမားတွေကနေ လာတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်းဖောင့်သုံးတုန်းက ပါဌ်ဆင့်တွေကို Alt နဲ့ နံပါတ် တွဲရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇော်ဂျီ ကို ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ Alt ကီးတွေကို မှတ်စရာမလိုတော့ပါဘူး Esc key ရဲ့ အောက်က " ~ " (Dead) ကီးလေးကို သုံးရင် အများအားဖြင့် စာလုံးထပ်သွားပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ Ctrl+Shift ကို သုံးပါတယ်။ မြန်မာသရီးကို ရောက်လာတဲ့အခါတော့ စာလုံးထပ် ရေးဖို့အတွက် Shift+f ကို သုံးရတဲ့ အနေအထားကိုရောက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပါဌ်ဆင့်ကိစ္စအတွက်ပါ။ နောက်တစ်ခုကွာဟချက်လေးတွေကတော့
မြန်မာသရီးမှာ ဝ လုံး က "W" အကြီး နေရာမှာပါ (Shift+w)
ဒဒွေး ကတော့ "K" အကြီး ဖြစ်သွားပြီး
ဓအောက်ချိုင့် ကတော့ "L" အကြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
ယပက်လက် ကလည်း "B" ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဓိက သုံးတဲ့ ဟာတွေပေါ့လေ.. ကျန်တာတွေလည်း တချို့ ကီးလေးတွေ နေရာရွေ့သွားပါတယ်
ဂငယ် ကလည်း အရင်လို ဂဏန်းရှစ် အပေါ်မှာမရှိတော့ဘဲ ကော်လံ လို့ခေါ်တဲ့ " : " နေရာကို ရွှေ့သွားပါတယ်။
ရရစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အရင်လက်ကွက်တုန်းက ရရစ်ကိုအရင်ရိုက်ပြီး ဗျည်းအက္ခရာကို နောက်မှရိုက်ပါတယ်၊ မြန်မာသရီးမှာတော့ လက်ရေးနဲ့စာရေးသလို/ စာလုံးပေါင်း အော်ဆိုသလိုပဲ ဗျည်းကို အရင်ရိုက်ပြီးမှ ရရစ်ကို ရိုက်ရပါတယ်။ ဥပမာ "ကကြီး ရရစ် ကြ" ဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ခုက မြန်မာအက္ခရတွေထဲက ခခွေးတို့ မ တို့လို စာလုံးမျိုးတွေနဲ့ ကကြီးတို့ တဝမ်းပူတို့လို အရွယ်အစားမတူတဲ့ ဗျည်းတွေအတွက် ရရစ် အကြီးအသေး ရွေးရခြင်း၊ ရရစ် ခေါင်းပြတ် ရရစ်ခြေပြတ် ရွေးရခြင်း ဆိုတာမျိုးတွေ မလိုတော့ပဲ ရရစ် " J " တစ်လုံးကိုသာ ရရစ်အဖြစ်ရိုက်ရုံနဲ့ နောက်လာတဲ့ ဗျည်းအက္ခရာကို သူ့ဘာသာသူ ရွေးချယ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးကိုတော့ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်၊
နောက်တစ်ခုကတစ်ချောင်းငင်နှစ်ချောင်းငင်နဲ့ပတ်သက်လို့ အတိုအရှည်ရွေးစရာမလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရကောက်ကိုလည်း ပုံမှန်ခြေရှည်နဲ့ ခြေအတို ရွေးစရာမလိုဘဲ " ရုံး နဲ့ ရှာ "လိုစာမျိုးရေးရာမှာ သူ့အလိုလို အမှန်ပြင်သွားပါတယ်။
နောက်ပြီး အက္ခရာ "ဥ" ဟာ ညလေး "ဉ" နဲ့မတူဘူးဆိုတာလေးကို မှတ်ရပါမယ်၊ ထို့နည်းတူ ဝလုံး "ဝ" နဲ့ သုည "၀" ဟာလည်း သပ်သပ်စီပါ။ "အရင်က ကျွန်တော်တို့ ရိုက်သလို အသွင်တူရင် ပြီးတာပဲ ဆိုတာမျိုး မရတော့ပါဘူး၊ စာလုံးပေါင်းကို ဖမ်းပါတယ်၊ သဝေထိုး ရိုက်လိုက်တာနဲ့ နောက်က ဝလုံးလိုလို အက္ခရာလေးတစ်ခု ဗျည်းလာရမယ့်နေရာကို ​"ေ" ဒီလိုလေး လာစောင့်နေပါတယ်၊ လုံးကြီးတင်တို့ ဟထိုးတို့ တစ်ချောင်းငင်တို့လို သရတွေအားလုံး ဒီလိုချည်းပါပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ဥပမာအနေနဲ့ အရင် ငွေကျပ် သင်္ကေတ အဖြစ် နောက်ဆုံးဂဏန်းပေါ်မှာ လုံးကြီးတင်တာမျိုး "ကျပ်တစ်ထောင်(၁၀၀၀ိ)" မရတော့ပါဘူး၊ သင်္ကေတ ပိုသွားတာကို တွေ့ရပါမယ်။
အများအားဖြင့်ကတော့ ပါဌ်ဆင့်တွေကို အကျွမ်းမဝင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ကဲ နည်းနည်း လေ့လာကြည့်ရအောင်
သတ္တိ = o +w + F + w +d[သ + တ + ္(Shift+f) +တ+ိ] သမားရိုးကျ ပါဌ်ဆင့်တွေက ဒီအတိုင်းပါပဲ.. နည်းနည်းဆန်းတဲ့ နှစ်ခုက အောက်မှာကြည့်ပါ
သင်္ဂဟ= o + i +f+ F + [
ဥက္ကဋ္ဌ= U + u + ္(Shift+f) + u + # + ္(Shift+f) + X
[ဥ+ က + ္(Shift+f) + က + ဋ + ္(Shift+f) +ဌ] ဌဝမ်းဘဲမှာ လည်ရစ်ပါတယ်ဆိုရင် အဲဒါက ဗျည်းကို ဋတန်လျင်းချိတ်နဲ့သတ်ပြီး ဌဝမ်းဘဲနဲ့ ဆင့်ထားတာပါ (ဥပမာ ဆဋ္ဌမ = ဆဋ်ဌမ)
ဂုဏဝုဍ္ဎိ = : + k + P + W + k + ! + ္(Shift+f) + ~ +d[ဂု+ဏ+ဝုဍ်+ဎိ]
ကျေးဇူး .. စီခေရဇီ